China Post Top Lamps China Manufacturers & Suppliers & Factory
Post Top Lamps - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Post Top Lamps)
Post Top Retrofit bụ 5000K cct, Azụmahịa 30 Watt Post Top Light ezubere iji dochie adị 100 Watt Metal Halide na High Nsogbu Sodium oriọna maka n'èzí ikanam Ogige Street Post, 30 Watt Ogige Uhie nwere ike dochie ebe a na-adọba ụgbọala ụgbọala mposi fixtures na post top ìhè retrofit, ịghaghachi ọkụ ọkụ omenala na...
50W mere ka oghere ogige ogige dị ọkụ
50W mere ka oghere ogige ogige dị ọkụ Atụmatụ: 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla....
50W na-eduzi ndị na-enye ìhè
50W na-eduzi ndị na-enye ìhè 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4. Uhie Gburugburu...
ETL DLC 50W mere ihe nkwụsị elu
ETL DLC 50W mere ihe nkwụsị elu 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4. Uhie...
30W DLC na-eduzi ihe mkpuchi ọkụ
30W DLC na-eduzi ihe mkpuchi ọkụ 1. 30W na- eduzi Post n'elu ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla....
30W Igodo Nkeji edemede Mee N'onwe Gị
30W Igodo Nkeji edemede Mee N'onwe Gị 1. 30W na- eduzi Post n'elu ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ...
Mmiri mmiri ọdọ mmiri nke 50W
Mmiri mmiri ọdọ mmiri nke 50W 1. Mmiri ọdọ mmiri 50W Nchekwa ike, ihe gbasara gburugburu ebe obibi, ọ bụghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. Mee ka ìhè mmiri 50W dị Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4. Buru ìhè 50W Egwu...
75W Led Igwu mmiri ọkụ
75W Led Igwu mmiri ọkụ 1. Mmiri mmiri na-ekpuchi 75W Nchekwa ike, ihe gbasara gburugburu ebe obibi, ọ bụghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. Nwee ike 75W Mmiri mmiri Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4. Buru ìhè 50W...
Mmiri mmiri ọdọ mmiri 100W
Mmiri mmiri ọdọ mmiri 100W 1. Mgba mmiri mmiri 100W Nchekwa ike, ihe gbasara gburugburu ebe obibi, ọ bụghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. Jide mmiri mmiri mmiri 100W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4. 100W Mmiri...
Post Top Lamps Post Top Light Post Top 30W Post Top 100W Post Top Lighting Led Post Top Lamp Anyanwụ Solar Post Top Lights Post Top Ngwunye